Etu esi achoputa ihe nkpuchi N95, NIOSH, ma obu KN95 nke nkpuchi site na China.
Biko Buru n'uche: A na-emelite isiokwu a mgbe niile ka m na-enweta ozi ọhụrụ, nke ziri ezi banyere nsogbu a na-aga n'ihu. Ọzọkwa, m na-amalite ihe ngwọta ebe anyị ga-emepụta nke mbụ n'ịntanetị, ụlọ ahịa na-emeghe maka ndị na-eweta ngwaahịa ruru eru na ndị ọrụ njedebe nke ezigbo PPE: PPEConnector.com. Kemgbe Machị, ...
N95 RESPIRATOR MASKS Ajụjụ
Zọ kachasị mma iji zere iku ume anwụrụ bụ ịnọrọ n'ime. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịpụ n'èzí na ọnọdụ anwụrụ ọkụ, nke a bụ ụfọdụ ozi maka ojiji nke N95 respirator masks. Q. Gini bu ihe iku ume nke N95? A. Nkụzi N95 bụ iku ume na-eme ka ikuku (APR) nke National Inst ...
Ebe nrụọrụ weebụ ọhụụ na-akọwa etu ụlọ ọgwụ nwere ike isi mebie ma jiri ya mee ihe N95 dị obere iji lụso COVID-19 ọgụ
Dika ndi oru ahu ike na ndi mbu na United States na-anwa igbochi oria ojoo n’enweghi ihe nchebe zuru oke, a na-amanye ndi oru ahu ike ka ha chee echiche - ichogharia ma jiri ihe nkpuchi N95 kpuchido ndi oru ha n’egosiputa oria ojoo nke na - akpata COVID-19. Taa, otu ...
Ndi Masks masịrị reusable?
Coronavirus na nso nso a (Covid-19) ntiwapụ emeela ọtụtụ mgbanwe na ndụ kwa ụbọchị na ndị ọrụ ahụike na-arụ ọrụ ha. Shortagekọ ndị na-egbu ume N95 emeela tupu (SARS, MERS, wdg), ọ bụghị na ọkwa a. CDC anaghị akwado ka ọha mmadụ wear ...
Akụkọ a na-apụghị ịgụta ọnụ nke nkpuchi N95
O siri ike iche echiche banyere akara ngosi nke COVID-19 karịa ọgbụgba ọkụ N95. Ihe nkpuchi ahụ dabara nke ọma na ihu ma nwee ike nzacha 95% nke irighiri ikuku, dị ka nje virus, site na ikuku, nke akụrụngwa nchedo ndị ọzọ (dị ka mkpuchi ịwa ahụ) enweghị ike ịme. Ọ bụ ihe na-azọpụta ndụ devi ...
Ojiji nke N95 Masks
Dika oria ojoo nke COVID-19 batara na onwa nke abuo ya (Eprel 2020) na United States, otu ihe kachasi ike nke ihe ogwu bu ihe di nkpirikpi: facemasks na-echekwa ahụike, nke a na-ahazi ma kọwaa ya maka otu iji naanị. Ugbu a, iji zute nkatọ na ngwa ngwa m ...
China 'Emeela Obodo Ya' Ndị Nkpuchi N95 ya
China 'emeela ka mba' buru nnukwu ibu ndị na-emepụta ihe nkpuchi N95, na-eme ka o siere ndị na-azụ ahịa ike ebe a itinye aka ha na ngwaahịa ọzọ, China na-achịkwa, kwuru otu nnukwu mbubata US. "A kagbuola iwu anyị niile, maka ọtụtụ nde nkpuchi N95, n'izu gara aga," ka Leo Friedman, onye isi oche iPromo na Chica na-ekwu ...
Onwere ihe di iche na nkpuchi N95 na KN95?
Ọkọlọtọ N95 / KN95 nkpuchi 1. Gini bu nkpuchi N95? Kedu ihe dị iche na nkpuchi KN95? Kedu ihe nkpuchi ndị ọzọ nke otu klas ahụ? Mask N95 nkpuchi na-ezo aka ihe nkpuchi nke NIOSH (National Institute of Safety Work and Health) kwadoro na arụmọrụ nchebe na-enweghị mmanu nke na-erughị ...